Kedu ka m ga - esi mezie n'usoro uwe mwụda ụmụ m?
Atụmatụ maka uwe eji edozi
Gụnye ụmụaka mgbe ị na-ehicha
Idebe iwu na uwe umuaka bụ ihe ịma aka. Uwe ndị ahụ dị obere, ma e nwere ọtụtụ ihe. N'ihi na ụmụ na-eto ngwa ngwa ma chọọ ihe ọhụrụ. Tụkwasị na nke a, ụmụaka ka ga-amụta ihe mere nhichachi mgbe niile dị mkpa ma nwee ezi uche. Ma site na ịbịaru nso na enyemaka nke ụmụntakịrị, ị nwere ike ijikwa ịchekwa mbọ gị.
Akwa na uwe
Tupu ịmalite ịmepụta n'usoro, ị ga-ebu ụzọ kpoo cupboard ahụ nke ọma.
Hichaa uwe akwa na akwalite
Ihe ọ bụla nke na-adịghịzi mkpa ma ọ bụ na-enweghị mmasị na-ewepụ ya. E nwere ọtụtụ ụzọ a ga-esi edozi ma kpochaa kaadị ahụ.
Na 3 crate usoro, n'ihi na ihe atụ, idozi niile uwe containers kpọrọ "Nọgidenụ", "Ọ bụghị ihe ọjọọ" na "ịtụfu". Ị nwere ike mgbe ahụ ikpebi ma na-ere ota ihe uwe, na-enye pụọ, tụfuo ma ọ bụ nye ọrụ ebere shop chọrọ.
Ọ bụ ezie na usoro a na-eme ka ndị ọzọ nwekwuo nsogbu na mbụ, ọ na-eme ka o kwe omume ịhazigharịa ọdịnaya nke uwe-akwa. I nwekwara ike iji oge iji kpoo cupboard efu.
Otu ụzọ dị irè iji zere ọgba aghara agaghị ekwe ka ọ mee. N'ezie nke a siri ike na ụmụaka. Ọ bụ ya mere ọdịnaya nke okpokoro ahụ kwesịrị iji mee ka ọ bụrụ enyi na enyi, nke mere na ihe nile nwere ebe ọ na-anọkarị:
Dee akwa dị iche iche dị iche iche na akpa akwa ahịa n'otu akpa, T-shirts na ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, jiri igbe dị iche iche na-echekwa akpụkpọ ụkwụ, pajamas, ịcha akwa ma ọ bụ ịcha ahụ. Iji mee ka ọ dịkwuoro gị na ụmụ gị mfe, ịnwere ike ịkpọ ha aha.
A na-echekwa ihe oyi na-adịghị mkpa n'oge okpomọkụ na ntụgharị ihu na igbe mechiri emechi na ma ọ bụ na okpokoro. Ya mere, ha na-echebekwa ha pụọ ​​na nsị.
Maka uwe ndị a na-eyi ma ọ dịghị mkpa ka a saa gị, ị nwere ike ịmepụta ohere dị iche. Dịka ọmụmaatụ, n'ụdị oche, okporo ígwè ma ọ bụ ọtụtụ nko n'elu akụkụ ma ọ bụ mgbidi. A na-eyi uwe ahụ ọzọ n'echi ya ma ọ bụ tinyeghachi ya na tebulu.
E kwukwara na ọ bụ nkata na-asa ákwà na akwalite. Akụkụ ndị na-adịghị mma na-abụzi ihe na-adịghị mma.
Ọbụna obere ụmụaka ga-amụta otú idobe nchekwa si arụ ọrụ. Dị ka nne ma ọ bụ nna, ị nwere ike ịkwado ụmụ gị. Ndị nne na nna na-abụkarị onye nlereanya, ọbụlagodi mgbe ị na-edozi. Ya mere, ọ dị mkpa ka ụmụ ha bie ndụ ụfọdụ. Ozi na ozi doro anya ka dị oke mkpa ọbụna mgbe ọ dị afọ iri na ụma, ka ụmụ wee mara kpọmkwem ihe ha ga-eme.
Ka ha wee nwee ike idebe iwu n'ime kaadị oge ha, ha ga-enwe ike iru ọdịnaya ahụ. Uwe ndị dị mkpa kwa ụbọchị, ya mere, ya mere ị gaghị anọ n'elu tray. N'ịkwado na ụmụaka buru ibu, ụmụ ntakịrị nwere ike ijikwa mma. Ọ dịịrị ha mfe iyikwasị uwe na Jetetị. Enwekwara usoro kabinye nke e mere maka ụmụaka na oke ha.
Ozugbo usoro ụfọdụ dị, ọ na-adịrị ụmụaka mfe ijide ya. Maka na ha nwere ike idebe onwe ha n'usoro ihe eji eme ihe na ọkwa. Idebe ihe haziri ahazi bụ usoro na-aga n'ihu. Ụmụaka na-etolite ma na-eto ngwa ngwa, ya mere a chọrọ uwe ọhụrụ n'oge obere oge.
N'ihi ya, a na-atụ aro ka ị kwado iwu maka ịkwado, dịka ọmụmaatụ site na ụbọchị edozi ka eji kpoo iko. E wezụga nke ahụ, dị ka 5-S usoro na-atụ aro ịhapụ foto nke ala dị mma mgbe ịchisịrị, wepụta na ihicha ụlọ. Ụmụaka nwere ike idebe nke a, ma ọ bụrụ na ha eme onwe ha ka ha dị ọcha.
Mgbe ụmụaka agbaji ihe | mmụta
Ụmụaka nwere nnukwu onyinye | mmụta